SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
MUNGUVA yakapfuura, matare edzimhosva mune imwe nyika yekumadokero akatongera rufu vamwe varume vaviri vainyeperwa kuti vakaponda munhu. Pakazozivikanwa kuti uchapupu hwacho hwaiva hwenhema, magweta akamira-mira kusvikira mumwe wevarume vacho anzi haana mhosva. Asi mumwe wacho akanga atourayiwa, saka pakanga pasisina zvekuita.
Sezvo matongero akadaro achigona kuitika mumatare, Bhaibheri rinokurudzira kuti: “Kururamisira—utevere kururamisira.” (Dheuteronomio 16:20) Kana vatongi vakaita izvi, zvinobatsira vanhu vose. Mutemo waMwari waikurudzira vaIsraeri kutonga nyaya zvakanaka pasina kusarura. Ngatimboongororai Mutemo wacho tione kana nzira dzose dzaMwari dziri “dzokururamisira.”—Dheuteronomio 32:4.
VATONGI “VAKACHENJERA, VAKANGWARA UYE VANE ZIVO”
Zvinhu zvinofamba zvakanaka kana vatongi vachiita basa ravo nemazvo, vasingasaruri uye vasingaiti uori. Mutemo wakapiwa vaIsraeri naMwari waisimbisa kuti ndizvo zvaifanira kuitwa nevatongi. Vachangotanga rwendo rwemurenje, Mosesi akaudzwa kuti asarudze “varume vanokwanisa, vanotya Mwari, varume vakavimbika, vanovenga mubereko usina kururama” kuti vave vatongi. (Eksodho 18:21, 22) Pashure pemakore 40, Mosesi akasimbisazve kuti varume “vakachenjera, vakangwara uye vane zivo” ndivo vaifanira kutonga vanhu.—Dheuteronomio 1:13-17.
Papera mazana emakore, Mambo weJudha, Jehoshafati, * akaudza vatongi kuti: “Onai zvamuri kuita, nokuti hamutongeri munhu asi Jehovha; uye iye anemi mukutonga kwacho. Zvino ityai Jehovha. Chenjerai, muite chimwe chinhu, nokuti kuna Jehovha Mwari wedu hakuna zvisina kururama kana rusaruro kana kugamuchira pfumbamuromo.” (2 Makoronike 19:6, 7) Nemashoko aya Mambo wacho akayeuchidza vatongi kuti kana vaizotonga nyaya nemakaro uye rusarura, Mwari aizovapa mhosva yezvakaipa zvaizoitika.
Vatongi vemuIsraeri pavaitevedzera mitemo yaMwari, vaIsraeri vaisambova nechekutyira. Mutemo waMwari waivawo nezvimwe zvaibatsira vatongi kupa mitongo yakarurama, kunyange panyaya dzainge dzakaoma zvikuru. Zvimwe zvacho ndezvipi?
CHII CHAIBATSIRA VATONGI KUTONGA ZVAKANAKA?
Kunyange zvazvo vatongi vaisarudzwa vaifanira kunge vari varume vakangwara uye vanokwanisa, vaisafanira kupa mitongo vachivimba nepfungwa dzavo kana kuti unyanzvi hwavo. Jehovha Mwari akavaudza zvaizovabatsira kutonga zvakanaka. Ngationei zvimwe zvacho.
Kunyatsoongorora. Achishandisa Mosesi, Jehovha akaudza vatongi vemuIsraeri kuti: “Pamunenge muchinzwa mhosva dziri pakati pehama dzenyu, mutonge zvakarurama.” (Dheuteronomio 1:16) Kuti vatongi vape mutongo wakarurama, vanofanira kuziva zvose zvakaitika. Saka Mwari akaudza vaya vaitonga nyaya kuti: “Iwe unofanira kutsvakawo, woongorora uye wobvunzisisa.” Dare raifanira kutanga raona kuti nyaya yacho ‘yasimbiswa kuti ndeyechokwadi’ risati rapa mutongo.—Dheuteronomio 13:14; 17:4.
Kunzwa uchapupu. Zvaitaurwa nezvapupu zvaikosha chaizvo pakuongorora nyaya. Mutemo waMwari waiti: ‘Chapupu chimwe chete hachifaniri kupupurira munhu pamusoro pokukanganisa chero kupi zvako kana kuti chero chivi chipi zvacho. Nyaya yacho inofanira kusimbiswa kana papupurirwa nezvapupu zviviri kana kuti papupurirwa nezvapupu zvitatu.’ (Dheuteronomio 19:15) Mutemo waMwari waiudzawo zvapupu zvacho kuti: “Usataura mashoko enhema. Usabatsirana nomunhu akaipa nokuva chapupu chinoronga kuita” zvakaipa.—Eksodho 23:1.
Kupa uchapupu hwechokwadi. Kurangwa kwaiitwa anenge anyepa mudare kwaiyambira vose vaizopa uchapupu nekuti Mutemo waiti: “Vatongi vacho vanofanira kunyatsoongorora, uye kana chapupu chacho chiri chapupu chenhema uye chapupurira hama yacho zvenhema, muchiitirewo zvachanga charonga kuitira hama yacho, uye unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.” (Dheuteronomio 19:18, 19) Saka kunyepa kuti upiwe nhaka yemumwe kwaiita kuti ubhadhariswe zvaienderana nezvawanga uchida kuwana. Kana munhu akapa uchapupu hwenhema kuti munhu asina mhosva aurayiwe, munhu wacho ainge anyepa ndiye aibva aurayiwa. Izvi zvaibatsira chaizvo kuti vanhu vataure chokwadi.
Kutonga pasina kusarura. Pashure pekuwana uchapupu hwese, vatongi vaibva vakurukura kuti vape mutongo. Ipapo vaifanira kunyatsotevedzera Mutemo waMwari unoti: “Usasarura akaderera, uye usada munhu mukuru [kana kuti munhu akapfuma]. Unofanira kutonga mumwe wako zvakarurama.” (Revhitiko 19:15) Nguva dzose vatongi vaifanira kutonga nyaya sezvairi, vasingatarisi chimiro chemunhu uye chinzvimbo chaaiva nacho.
Pfungwa idzi dzakajeka dziri muMutemo wakapiwa vaIsraeri naMwari dzinogonawo kushanda mumatare mazuva ano. Kana dzikatevedzerwa, nyaya dzinotongwa zvakanaka uye vanhu havazorangirwi mhosva dzavasina kupara.
Vanhu havazorangirwi mhosva dzavasina kupara kana vatongi vakatevedzera pfungwa dziri muMutemo waMwari
VAISRAERI VAKABATSIRWA NEKUTONGA KWAKARURAMA
Mosesi akabvunza vaIsraeri kuti: “Ndorupi rudzi rukuru ruripo rune mirau yakarurama nezvakatongwa sezvakaita mutemo wose uyu wandiri kuisa pamberi penyu nhasi?” (Dheuteronomio 4:8) Zvechokwadi hapana rumwe rudzi rwaitungamirirwa nemutemo waMwari. Paitonga Mambo Soromoni uyo akatanga kuteerera mitemo yaJehovha achiri mudiki, vanhu vaigara “vakachengeteka,” kuine runyararo uye vanhu vakagarika, “vachidya nokunwa nokufara.”—1 Madzimambo 4:20, 25.
Zvinosuwisa kuti vaIsraeri vakazoguma vasisateereri mitemo yaMwari. Achishandisa muprofita Jeremiya, Mwari akataura kuti: “Tarirai! Vakaramba shoko raJehovha, kuchenjera kwavo kuripi?” (Jeremiya 8:9) Izvi zvakaita kuti Jerusarema rive “guta rine mhosva yeropa” uye rizare nezvinhu “zvinosemesa.” Rakazoparadzwa, ndokuva dongo kwemakore 70.—Ezekieri 22:2; Jeremiya 25:11.
Zvinhu zvakanga zvisina kugadzikana muIsraeri panguva yakararama muprofita Isaya. Achifunga nezvenguva iyoyo, Isaya akataura mashoko anokosha nezvaJehovha Mwari uye Mutemo wake achiti: “Kana paine kutonga kunobva kwamuri nokuda kwenyika, vagari vomunyika inobereka vachadzidza kururama.”—Isaya 26:9.
Isaya akafara paakafemerwa kunyora uprofita hwaitaura nezvekutonga kwaMambo Mesiya, Jesu Kristu, achiti: “Haazotongi nokungoona chete nemaziso ake, kana kungotsiura maererano nezvaanenge anzwa nenzeve dzake. Asi achatongera vakaderera nokururama, uye achatsiura nokururama nokuda kwevanyoro venyika.” (Isaya 11:3, 4) Chokwadi idzi itarisiro dzakazonaka dzine vanhu vachatongwa naMambo Mesiya muUmambo hwaMwari!—Mateu 6:10.
^ ndima 6 Zita rekuti Jehoshafati rinoreva kuti “Jehovha Ndiye Mutongi.”
Mutemo waMwari Waibvumidza Munhu Kutsiva Here?
Vanhu vakawanda vanotaura zvakasiyana-siyana nezvemashoko emuBhaibheri anoti “ziso neziso, zino nezino.” (Eksodho 21:24) Vamwe vanofunga kuti anoreva kuti Mwari anobvumidza kutsiva. Asi izvozvo zvinopesana nemutemo waMwari unoti: “Usatsiva kana kuchengetera vanakomana vevanhu vokwako mafi.” (Revhitiko 19:18) Saka mashoko iwayo ari muna Eksodho anorevei?
Eksodho 21:22 inotaura zvaiitwa kana varume vaviri vakarwisana, mumwe wacho okuvadza mukadzi ane pamuviri, zvoita kuti asununguke nguva isati yakwana. Kana mukadzi nemwana wacho vakasafa, murume wemukadzi ainge akuvadzwa aisabvumidzwa kutsiva. Asi murume ainge akuvadza mukadzi wacho aifanira ‘kuripiswa kukuvadza kwaakaita maererano nezvaaitarirwa nemuridzi wemukadzi wacho; uye aifanira kuzviripa achishandisa vatongi.’ Zviri kurehwa ndezvekuti vatongi vaiva mudare vaiita kuti ainge akuvadza wacho abhadhare faindi kumurume wemukadzi akuvadzwa. Kana mukadzi kana kuti mwana wacho akazofa nekukuvadza kwacho, vatongi ivavo vaizoita kuti akakuvadza wacho aurayiwe.
Munhu ainge atadzirwa haasiriye aipa mutongo wacho. Asi dare ndiro raipa mutongo wekushandisa mutemo wekuti “mweya nomweya, ziso neziso, zino nezino . . . ” (Eksodho 21:23, 24) Izvi zvaiyeuchidza vatongi kuti chirango chaifanira kunyatsoenderana nezvakatadzwa. Mumwe muongorori weBhaibheri, Richard Elliott Friedman anoti: “Zvinoita sokuti pfungwa inokosha apa ndeyekuti chirango chinofanira kunyatsoenzana nenyaya yakaparwa uye hachifaniri kuipfuura.”
Chii chakaita kuti vamwe vafunge kuti Mutemo waMwari waibvumidza kuti munhu atsive oga? Tinowana pfungwa inokosha pana Mateu 5:38, 39 Jesu paakati: “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Ziso rinotsiviwa neziso uye zino nezino.’ Zvisinei, ini ndinoti kwamuri: Musadzivisa munhu akaipa; asi munhu wose anokurova nembama padama rako rokurudyi, umupewo rimwe racho.” Zvinoita sokuti pakazouya Jesu vamwe vadzidzisi vezvitendero vakanga vawedzera mutemo waingoita zvekutaurwa, waibvumidza kuti kana munhu atadzirwa atsive oga. Asi Jesu akaratidza zvakajeka kuti Mutemo wakapiwa vaIsraeri naMwari wakanga usingatsigiri izvozvo.
Nei kururamisira kwaMwari kuchifadza?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI September 2014 | Vanhu Vachaparadza Pasi Rino Zvokusagadzirisika Here?